नेपाल भारतबीचको सीमा नाकाको सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो छ त ?
बिहीवार, मंसिर १४, २०७४
काठमाडौं : प्रदेश र प्रतिनीधि सभाको निर्वाचन लक्षित गरी दर्जनौं स्थानहरुमा बम विस्फोट भैसकेका छन् । निर्वाचन अवधिमा प्रहरीले ठूलो परिणाममा विस्फोटक पदार्थसहित अढाइ सय मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । विस्फोटक पदार्थ भने भारतवाट भित्रिएको प्रहरी बताउँछन् । नेपाल भारतवीचको सीमा नाकाको सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो छ त ?
काठमाडौ उपत्यकाको सुरक्षा जाँचमा यतिवेला प्रहरीले कडा रणनीति अपनाइरहेको छ । प्रभावकारी सुरक्षा रहेको बताइरहेको प्रहरी दावीबीच केहि दिन अघि ललितपुर र भक्तपुरमा बम विस्फोट भए । उपत्यका वाहिर भने निर्वाचनलाई अवरोध गर्ने गरी दर्जनौं स्थानमा बम विस्फोट भैसकेका छन् ।
बम बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीहरु अर्थात बारुद, डेटोनेटर, लोला र फ्युज वायर । यिनै प्रज्वलनशील सामग्रीहरुलाई विभिन्न वस्तुमा राखेर विस्फोट गराइरहेको छ । प्रहरीले २ हजार डेटोनेटर, पटाका, ५ सय ५५ लोला, १४ किलोग्राम वारुदका साथै २ सय २३ मिटर फ्युज वायर वरामद गरेको जनाएको छ । ती सामग्रीहरु भारतबाट ल्याइएको प्रहरी बताएका छन् ।
निर्वाचन विरोधी शक्ति या समूहले ती सामानहरु भारतवाट ल्याइएको बताइरहँदा सीमा नाकासँग जोडिएका केहि जिल्लाहरु पर्सा, नवलपरासी र नेपालगञ्जको सुरक्षा जाँच भने फितलो देखिन्छ । तर प्रहरी र स्थानीय प्रशासन भने सुरक्षा जाँच र व्यवस्था मजवुत भएको दावी गर्छ ।
सीमा नाकामा हुने सुरक्षा जाँचलाई थप कडाइको साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् । नेपाल भारतको मुख्य नाकाहरु मात्र नभएर अन्यत्रबाट समेत विस्फोटक पदार्थ भित्रिएको हुनसक्ने उनीहरुको आशंका छ ।
जनधनको क्षति हुने गरी भैरहेको यस्ता विस्फोटको अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन । ढिलै गरी वुधवार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको वैठक बसी सरकारले अधिकतम वल प्रयोग गर्ने नीति भने लिएको छ । शान्त, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ ।